को पाठ्यक्रम, धातु प्रवेश ढोका धेरै सुरक्षित काठ संरचना छ। मात्र सबै नै यसलाई नै वा पछि धातु बनेको मरम्मत इस्पात ढोका बनाउन आवश्यक सम्भव छ। र यो मामला मा यो एक विशेषज्ञ हेर्न मनमोहक छ, तर सानो क्षति आफ्नै हातले निर्मूल गर्न सकिन्छ।
अधिकांश मानिसहरू मा हुन सक्छ कि सबै भन्दा साधारण समस्या - लक तोड्न। तपाईं पनि त्यस्तै ताला उपकरण आवश्यक व्यास पाउन सक्नुहुन्छ भने, यो सम्पूर्ण संयन्त्र पर्याप्त छ प्रतिस्थापन गर्नेछ। सरल ताले संग, सबै कुरा सजिलो छ, तर तपाईं एक राम्रो लक सेट भने, उदाहरणका लागि, ठाडो बोल्ट संग, यस मामला मा आवश्यक एक विशेषज्ञ हेर्न छ।
धेरै सजिलै देखिने दोष, त्यसैले यो अपार्टमेन्ट वा घर को ध्यान मालिक बिना रहन छैन। त्यहाँ केही जो आफैं हटाउन सकिँदैन यो समस्या धेरै कारण छन्। मात्र सीधा आफ्नै सक्षमता, आवश्यक भएमा, यो एक पेशेवर कल गर्न मनमोहक छ आकलन र लागत।
- टूटे वा छाडा टिका। यो एकदम अक्सर हुन्छ, र अक्सर सहायता बिना निर्मूल। को टिका छाडा वा बिग्रिएका छन् भने, यस्तो छ कि समस्या हात द्वारा सजिलै निर्मूल गर्न सकिन्छ। किन्न यी वस्तुहरू कुनै पनि विशेष पसलमा हुन सक्छ।
- ढोका को ठूलो वजन। अगाडि ढोका धेरै भारी छ भने, प्रवेश धातु ढोका को मर्मत केही अन्तरालहरुमा गर्नेछ आवश्यक छ। लूपहरूको आफ्नो वजन कायम राख्ने छैन, कमजोर हुनेछ। मात्र समाधान मात्र रोगी प्रतिस्थापन टिका हुन सक्छ।
- दबाव घर। प्रायजसो यस्तो समस्या को परिणाम ढोका र पूर्ण प्रतिस्थापन किनभने सबैभन्दा अप्रिय अवस्था, कि हुन सक्छ खोल्ने ढोका। अक्सर यस हुन्छ ब्लक को घरमा र अखंड प्रकार। समस्या कम समस्याग्रस्त समाधान निजी घरहरू को मालिक हुनेछ। त्यहाँ प्रवेश ढोका को मर्मत आधार अन्तर्गत राखिएको विशेष वेज मदत गर्न कहाँ अवस्थामा छन् ढोका फ्रेम।
गरिब गुणस्तर रंग, खरोंच, ढोका मा सानो कमजोरीहरू कारण केही ठाउँमा जंग हुन सक्छ। ढोका तल्लो भाग जहाँ यो समस्या सजिलै गठन गर्न सकिन्छ स्थान हो। समाप्त गर्न मात्र तरिका - चित्रकला सहित केही गतिविधिहरु, सञ्चालन। यस मामला मा, पैसा बचत गर्न, यो आवश्यक मरम्मत आफ्नै हातले ढोका बनाउनु हो।
काम लागि आवश्यक उपकरण:
- मध्यम र ठीक घर्षण कपडा।
- धातु मा ब्रश।
- Caulking धातु।
- डिब्बे मा प्राइमर र रंग।
समस्या समाधान गर्न कदम:
- प्रवेश धातु ढोका को मरम्मत पूरा गर्न गर्न ढोका को तयारी। पहिलो चरणमा फिटिंग र छाप फुकाल्नु छ। यो पनि भित्री अस्तर रक्षा गर्न लायक छ। यस मामला मा, सहायक एक सरल फिलिम हुनेछ।
- र खियाले (रंग बिगार्छ गर्न) अनावश्यक हटाउनुहोस्। पहिलो, तपाईंले भद्दा स्यान्डपेपर काम गर्न र त्यसपछि ठूलो खरोंच हटाउन एउटा सानो लागत लागू गर्न आवश्यक छ। यो पनि त्यहाँ फोर्जिंग र नक्कली प्यानल एक ढोका छ भनेर भन्न हुँदैन। त्यहाँ एक विशेष चुच्चो भएको सहायक ड्रिल हुनेछ।
- सतह समस्या Degrease। विलायक सुक्खामा भने, काम अर्को चरण सुरु नगर्नुहोस्।
- पुटीन कार्य। माथि उल्लिखित कदम breaching पछि, तपाईं धातु ढोका को समस्या मा पुटीन स्प्रे गर्न तयार छन्। यो कम्तिमा पनि दुई तहहरू लागू गर्न मनमोहक छ, तर यो therebetween तहहरू सुक्खामा समय कुर्न आवश्यक छ। त्यसपछि मात्र तपाईं सामाग्री equalize सुरु गर्न सक्नुहुन्छ।
- Aerosol प्राइमर। यो पदार्थ ढोका सम्पूर्ण सतह प्रधानमन्त्री गर्न आवश्यक छ।
- रंग को आवेदन। अघिल्लो तह, अर्थात् एक aerosol रंग को पहिलो पत्र लागू गर्न सकिन्छ जब ड्राई। रंग drips चाहन्थे छैन, त्यसैले ढोका तल्ला वा अन्य तेर्सो सतह मा राख्न मनमोहक छ। जब मरम्मत प्रवेश धातु ढोका, छैन फर्श र वस्तुहरु सहित वरिपरि गडबड ताकि, यो सम्भव सबै गत्ता वा अन्य सहायक सामाग्री आयातित छ।
- रंग को दोस्रो कोट। यो चरण भने मात्र त्यहाँ रंग को पहिलो तह पूरा सुकाउने थियो गरिन्छ। साथै, यस अघि sanded गर्न सकिन्छ streaks गठन।
जब ढोका वांछित उपस्थिति मा ल्याइएको हो, यो एक पाश मा राख्न सकिन्छ।
दुर्भाग्यवश, थुप्रै ढोकाहरू, धातु निर्माण बनेको, राम्रो ध्वनि इन्सुलेशन छैन। निस्सन्देह, यो स्थिति दिन र रात मा एक घर वा घर को सबै बासिन्दा सडक वा प्रवेश देखि आ एक्स्ट्रानिअस शोर रोक्न हुनेछ भन्ने तथ्यलाई तिर जान्छ। मात्र समाधान - मरम्मत प्रवेश धातु ढोका को तह मा वृद्धि संग ध्वनि-इन्सुलेट सामाग्री को।
स्वतन्त्र काम उत्पादन वा विशेषज्ञ कारण? के यो एक डबल edged तरवार हो भन्न सकिएन। तपाईं कठिनाई विभिन्न स्तर को मरम्मत काम पूरा मा आवश्यक अनुभव छ भने, तपाईं तिनीहरूलाई आफैलाई गर्न सक्नुहुन्छ। तर अझै पनि आफ्नो जटिलता सजग हुन। तपाईं कुनै अनुभव छ भने, यो एक ज्ञान व्यक्ति (यो सिर्फ सुझाव को रूप मा एक मद्दत हुन सक्छ, र अर्थपूर्ण काम हुन सक्छ) परामर्श गर्न सबै भन्दा राम्रो छ।
भित्री ढोका मर्मत
धातु ढोका को मर्मत कुरा, यो भित्री ढोका को मर्मत सम्बोधन गर्न आवश्यक छ। यसलाई ढोका धेरै पटक थप इनपुट खोलिएका छन् को रूप मा, घर वा घर को काठ भाग प्रायजसो छ। यी तथ्यहरू, असफलता को सम्भावना उच्च मा आधारित।
- कोर्छ, peeling रंग, आदि ...
- टूटे लक ह्यान्डल।
- ढोका र ढोका फ्रेम अफसेट।
- खुर्केर सफा गर्नु, लूपहरूको कमजोर बनाइरहेका।
मूलतः यी समस्याहरू थप ज्ञान र सीप आवश्यक छैन, त्यसैले तपाईं एक विशेषज्ञ को सहायता बिना आवश्यक काम गर्न सक्नुहुन्छ। यो समय र पैसा बचत हुनेछ।
तपाईं सधैं समस्या र जटिलता को स्तर मा निर्भर गर्दछ, भित्री र बाहिरी को ढोका मर्मत गर्न आवश्यक छ भने, तपाईं स्वतन्त्र काम र एक पेशेवर को सहायता बीच चयन गर्न सक्नुहुन्छ। त्यसैले तुरुन्तै तपाईं पहिलो आफ्नै तागत र क्षमता आकलन गर्न सक्छन् किनकी, मर्मत कल छैन।
कसरी पछि लाग्नुलाई मा वर्ग मीटर रूपान्तरण गर्न? प्रति वर्ग मीटर रैखिक मीटर देखि विभिन्न के हो?
ड्रेनेज उपकरण नालियों
Transom: यो छ के, के आवश्यक छ र के छ
असल र खराब - को बालकनी र अन्य विन्डो खुलने Toning
अनुकूलता: "Detraleks" र रक्सी। दबाइ को प्रयोग, उपयोग को लागि निर्देश, contraindications
Moustached महिला। किन महिला mustaches बढ्न गर्छन् र कसरी यो युद्ध गर्न?
विवरण: बफर के हो
तपाईंलाई थाहा छ संसारको सानो भन्दा सानो के हो?
कुटपिट मा माछा: तयार कसरी
Aleksandr Gutor: जीवनी, पेसा
"Brigantine" उत्कृष्ट शिविरमा। क्रिमीआ - एक अद्भुत उपत्यका!